SAKAN-DALAN’NY POLISY : Rongony 16 kg sarona, voasambotra ireo efa-dahy tompon’antoka
Misesilany ny fahatrarana ireo tambajotra mpanao aferana zava-mahadomelina eto amintsika tato ho ato. Lehilahy miisa efatra indray no voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny « Commissariat Central Antsirabe », noho ny fahatrarana rongony saika hoentina hiakatra eto Antananarivo. 12 juillet 2019
Sakan-dalana nataon’ny Polisy avy ao Antsirabe tamina taksiborosy mampitohy an’i Fianarantsoa sy Antananarivo no nahasaronana rongony milanja 9 kilao izay natao tao anaty gony miisa roa miampy harona iray ny talata 09 jolay lasa teo, tokony ho tamin’ny 04 ora30 maraina tany ho any.
Tra-tehaka tamin’izany ny lehilahy anankiroa izay voalaza fa tompon’entana. Voaporofo tamin’ny loharanom-baovao hatrany fa avy ao Ihosy no nangalan’izy roa lahy ilay rongony ary nifindra fiara tao Fianarantsoa izy ireo ka saika hamidy eto an-drenivohitra saingy izao tra-tehaka izao. Ankoatra izay, ny ampitson’ny alarobia 11 jolay tokony ho tamin’ny 03 ora maraina, dia taksiborosy mampitohy an’ Ihosy sy Antananaraivo indray no nosavain’ny Polisy tao Antsirabe ka nahatrarana rongony milanja 07 kilao. Roa lahy ihany koa ny tompon’ilay entana ary dia notanana avy hatrany izy ireo. Tamin’ny fanadihadiana no nahalalana fa avy any Ambovombe indray no nakan’izy ireo ilay rongony.
Manamarika ny fitobahan’ny zava-mahadomelina eny amin’ny lalam-pirenena fahafito iny ireo tranga miisa roa ireo ka eo anatrehan’izay indrindra dia manamafy ny fanaraha-maso akaiky ny eo anivon’ny mpitandro filaminana raha ny tatitra voaray hatrany.